Baadiyow: "Muddo kordhintu waa billowga musiibo qaran" | KEYDMEDIA ONLINE
Baadiyow: “Muddo kordhintu waa billowga musiibo qaran”
Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi ‘Baadiyow’ oo ka mid ah aqoon yahanada Soomaliyeed ayaa musiibo qaran ku tilmaamay, damaca ay Farmaajo iyo Maxamed Mursal qabaan ee ah muddo kordhinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi ‘Baadiyow’ oo ah siyaasi iyo Aqoon yahan usoo is taagay qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in mudoo kordhin loo sameeyo hay’adaha Dowladda ee waqtigoodu dhamaaday ay la micno tahay fowdo iyo burbur.
Aqoon yahanku wuxuu xusay in aan damacaas gurracan shaqeyn doonin, lana ogolaan doonin in albaabka laga qaado billowga musiibo qaran, waxuuna ku celceliyay in arrinkaas laga joogo.
“Haddii ay dhacdo muddo kordhinta la sheegaayo ee hay'adaha la doorto ee qaranka Somaliyeed, waa bilowgii musiibo qaran, fowdo iyo sharta oo albaabka loo balaqay, mana shaqayneyso. War arinkaas ha laga joogo!! War arinkaas ha laga joogo!! War arinkaas ha laga joogo”.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa doonaya inuu adeegsado sifo kasta uu kusii joogi karo kursiga, wuxuuna guddoomiyaha Golaha Shacabka kula heshiiyay in uu qaab af duub ah ugu siyaadiyo waqtiga.
Waxaa sii siyaadaya indheer-garadka Soomaaliyeed ee ka digaya damaca muddo kordhinta, waxaana aqoon yahannadu ku talinayaan in la dhameystiro, heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray Muqdisho, si loo aado doorasho la isla oggol yahay.